औषधिमा मनोमानी अन्त्य होस् – Rajdhani Daily
औषधिमा मनोमानी अन्त्य होस्
नेपाली बजारमा १ हजार ३ सय प्रकृतिका औषधि बिक्री भइरहे पनि बढी प्रयोगमा आउने ९६ प्रकृतिका औषधिको मात्रै अधिकतम मूल्य तोकिएको छ । प्रयोगमा आउने अन्य औषधिको मूल्य नतोकिँदा बिरामी मारमा पर्ने गरेका छन् । औषधि, सामान्यतया बिरामी हुँदा त्यो पनि डाक्टरको सिफारिसमा प्रयोग गरिन्छ । डाक्टरले सिफारिस गरेकै औषधि खानुपर्छ भन्ने मान्यता छ । अधिकतम मूल्य नतोकिएको औषधि प्रयोग गर्दा बिरामी मारमा पर्ने गरेका छन् । किनकि, नेपाल सरकारले मूल्य नतोकेको औषधि कम्पनी आफैंले मूल्य निर्धारण गर्छन् भने बिरामी कम्पनीले तोकेकै मूल्य तिर्न विवश हुन्छन् ।
एउटै रोगमा पनि धेरै प्रकृतिका औषधि प्रयोग हुन्छन् । नेपालमा थोरै मात्रै औषधि उत्पादन हुँदा धेरै औषधि विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जब विदेशमै बनेको औषधि हामीले उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने मूल्य तोक्न किन आपत्ति ? औषधिको मूल्य तोक्ने दायित्व औषधि व्यवस्था विभागको हो तर विभागले दुई वर्षदेखि औषधिको मूल्य निर्धारण नै गरेको छैन । औषधि ऐन २०३५ अनुसार विभागले आवश्यक देखेमा सरकारको स्वीकृतिमा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्नसक्छ । पछिल्लो समय अस्पतालको संख्याजस्तै रोगको प्रकृति पनि बढ्दै गएको छ । सरकारी तथ्यांकमा १ हजार ३ सय प्रकृतिका औषधि बिक्री भएको देखिए पनि तथ्यांकमा उल्लेख गरिएभन्दा धेरै प्रकृतिका औषधि खपत भएका छन् । कतिपय ठूला अस्पतालले सरकारको तथ्यांकमै नभएको औषधि पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जब सरकारले सूचीकृत गरेको औषधिकै मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन भने अन्य औषधिको मूल्य सहज होला भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन ।
औषधि व्यवसाय पछिल्लो समय माफियाको कब्जामा नियन्त्रित व्यवसायका रूपमा चिनिन्छ । सीमित व्यवसायीको मनोपोलीकै कारण कतिपय औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर बिरामीलाई महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । डाक्टरहरूले यही औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिने र औषधि व्यवसायीले यो औषधि पाइँदैन भनेर बिरामीलाई अँत्याउने प्रवृत्ति नभएको होइन । यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क तिरेर पनि बिरामी औषधि खरिद गर्न बाध्य हुन्छन् । अब सरकारले नेपालमा सूचीकृत भएका मात्रै होइन, नेपालका अस्पतालमा प्रयोग हुने सबै किसिमका औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न जरुरी छ । जब बिरामी र अस्पतालका लागि ती औषधि नभई हुन्न भने नियन्त्रण गरेर के फाइदा ? यस्ता विषयमा पनि सरोकारवाला निकायका अधिकारी गम्भीर हुन जरुरी छ ।
Tags: औषधिमा मनोमानी अन्त्य होस्